Google Photos dia manitatra ny fiasan'ny serivisy | TeraNews.net
mpanoratra Nikitin Eugenius Navoaka tamin'ny 10.09.2021
Google dia manatsara hatrany ny serivisy ary ny fanavaozana nisy fiantraikany tamin'ny Google Photos dia nankafizin'ny mpampiasa. Ny fitehirizana sary gigabytes ao anaty rahona dia tsara, saingy maharitra. Isan-taona dia manaisotra ny sary ireo tompony mba hanitarana ny toerana na handefa fotsiny ireo fahatsiarovana hohadinoina. Noho izany, ny tolo-kevitr'ilay orinasa - ny fanaovana sary an-tsaina ny sary mamiratra indrindra amin'ny endrika taratasy, dia lasa tolo-kevitra mahaliana sy tadiavina. Marina, any Etazonia sy Kanada ihany no misy ny serivisy. Saingy tsy ho ela dia hisy fiatraikany amin'ny firenena sisa manerantany ity fanavaozana ity.
Google Photos - manaova sary ary alefaso any amin'ny tompony
Tsy mila mandany fotoana mitady orinasa hamindra sary kalitao amin'ny taratasy. Google dia hanao izany rehetra izany ho antsika. Na ho an'ny vola aza, fa ny kalitaony dia ho avo dia avo. Ny mpampiasa dia atolotra hahazo sary amin'ny karazana faritra rehetra - taratasy, lamba, lamba, sns. Gloss na matte ambonin'ny, famolavolana fitsaboana, habe - azonao atao ny misafidy ireo masontsivana. Ary ny ampahany tsara indrindra dia ny set miaraka amina rakitsary misy marika misy fonosana malefaka na mafy.
Mety ho hafahafa amin'ny sasany izany, fa araka ny antontan'isa, maherin'ny 90% ny mpampiasa efa ela (20 taona mahery) no nampiato ny fanontana sary an-taratasy. Tsy misy faniriana izany fotoana izany. Na ireo orinasam-panontana aza tsy misy any amin'ny tanàna rehetra - tapaka izy ireo noho ny tsy fahampian'ny fangatahana. Maninona raha mampiasa serivisy mety hanampiana ny olona amin'ny taona rehetra hitadidy ny fahatsiarovany mandrakizay.
Ny tolotra Google Photos dia tena mahaliana ary azo antoka fa hahita fanohanana eo amin'ireo mpankafy maka sary tsy hay hadinoina. Zava-dehibe ny fanarahana ny torolalan'ny orinasa momba ny kalitaon'ny sary nomerika (famahana). Rehefa dinihina tokoa, rehefa mamindra sary amin'ny taratasy dia ilaina ny kalitao mety. Google intelligence dia afaka manitsy sary, fa tsara kokoa raha toa ka mahafeno ny toetra voalaza rehetra ny rakitra voalohany.